दलिय सर्कुलरबाट माथी कहिले उठ्छ पत्रकार महासँघ? - समय-समाचार
दलिय सर्कुलरबाट माथी कहिले उठ्छ पत्रकार महासँघ?
समय-समाचार आईतबार, २०७७ चैत्र १५ गते, १०:१४ मा प्रकाशित
यतिबेला देशैभरका पत्रकारहरुबिच चुनावी सरगर्मी बढिरहेको छ । चैत्र २५ गते चुनावको मिती तोकिएको छ भने चुनावमा आफूलाई अब्बल मानेर उम्मेदवारी दिनेको लर्को पनि बढ्दो क्रममा नै रहेको छ ।
तिनवटा तहलाई निगरानी गर्ने भनेर मानिएको चौँथो अँग हो पत्रकारिता तर तिनै पत्रकारलाई दलिय पार्टीहरुले निगरानी गर्नु र नियन्त्रणमा राखिनु दुःखको कुरा हो । जती नै स्वतन्त्र भनिएपनि भित्रभित्रै रुपमा पार्टी कार्यालयमा पार्टीका नेताहरुलाई साक्षी राखेर सेटिङ गरिनु, भागवण्डा मिलाइनु, लविङ गरिनुले नै आम पत्रकारिता जगतको हविगत स्पष्ट पारेको छ । पत्रकारको चुनाव पत्रकारलाई भन्दा पार्टी र पार्टीका नेताहरुलाई बढी लागेको देखिन्छ । उनीहरु आफना पार्टीका पत्रकारहरुलाई कसरी नेतृत्वमा ल्याउने, अनि कसरी त्यो पत्रकार त हाम्रै हो नी भनेर छाती चौँडा गरेर हिँड्ने भन्ने कसरतमा छन् ।
पत्रकार महासँघमा उम्मेदवारी दिने अधिकाँश कुनै न कुनै पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेको पाइन्छ । तर केही पत्रकारहरु भने स्वतन्त्र पनि छन् । उनीहरु हरेक चुनावमा स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दछन् तर उनीहरुको सँख्या नगन्य छ । उनीहरुलाई कसले साथ दिने ? किनभने उनीहरुसँग न कुनै ठूला नेताको आर्शिवाद छ ,न नै उनीहरुको पछी लाग्दा उम्मेदवारले केही पाउनेवाला छन् ।
अझ गहिरिएर हेर्ने हो भने , पत्रकारितामा ओझिलो स्थान बनाएका पत्रकारहरु जसले साँच्चै पत्रकारको उत्थानमा केही काम गर्ने सार्मथ्य राख्छन् उनीहरुको ठूलो सँख्या महासँघ बाहिर छ । उनीहरु चुनावी चलखेल भन्दा पनि पेशागत मर्यादामा रमाइरहेका छन् । महासँघमा त्यस्ता पत्रकारको चासो घट्दै गएको पाइन्छ, किनभने बस्तुस्थितीले उनीहरुमा निराशा पैदा गरिरहेको छ ।
एमाले, काँग्रेस, माओवादी लगायतका सबै पार्टीका नेताहरुले आफनो पार्टीमा आस्था राख्ने पत्रकारहरुलाई सोझै निर्देशन दिनु , सर्कुलर पठाउनु लगायतका कामले पत्रकार महासँघको चुनाव पत्रकारको भन्दा पनि पार्टीको भातृसँगठनको चुनाव जस्तै हुने गरेको छ ।
यसपटकबाट पत्रकार महासँघका सदस्य बनेका देशैभरका सबै पत्रकारले सबैलाई भोट हाल्न पाउने अधिकार छ । राजनितिक आस्था आ–आफनो ठाउँमा हुन्छ तर त्यही आस्थामा रहेर पत्रकार–पत्रकारबिच जुँगाको लँडाई गर्नुभन्दा पत्रकारितामा साँच्चै नयाँ योजनाहरु ल्याउन सक्ने, यसलाई अझ परिष्कृत गर्न सक्ने, गफ र भाषण भन्दा पनी काम बढी गर्ने नेतृत्व पत्रकार महासँघले खोजेको छ । पत्रकारीतालाई थप उचाँईमा पु¥याउनेखालको नेतृत्वलाई नेतृत्वमा पु¥याउनु आम पत्रकारको कर्तब्य हुन आउँछ